Ndi Ripoblikan na-esi anya mmiri anya mmiri - Igbo News | News in Igbo Language
Nov 7, 2012 - 23:59 Updated: Jan 19, 2021 - 23:59
Ndị Rịpọblịkan na-anya isi si na ha agaghị ekwe ka onye isi ala Amerịka, bụ Barack Obama, nwete afọ anọ ọzọ n’ọkwa ya.
Obodo ederego duu n’ala Amerịka. Ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị Rịpọblịkan na-esi anya mmiri anya mmiri maka ihe ihere ha nwetere n’abalị ụnyaa.
Kemgbe afọ atọ na ọkara ka ndị Rịpọblịkan na-anya isi si na ha agaghị ekwe ka onye isi ala Amerịka, bụ Barack Obama, nwete afọ anọ ọzọ n’ọkwa ya. Kemgbe ahụ ka ha na-agba Obama mgba n’ụdị dị iche iche.
Mgbe ha mere ntụli aka nke okwuru ụlọ, ha họpụtara Mitt Romney, aka chiburu Steeti Massachussets, onye ha chere na ọ ga-emeri Obama na ntụli aka ozuru ọha.
Mgbe okwe gbara na ntụlị aka ozuru ọha ahụ e mere ụnya, Obama mere Romney ihu aja aja. Ndị Amerịka họpụtara Obama ọzọ, nye ya ikike ka ọ chịaa afọ anọ.
N’ogbe ebe ndị Rịpọblịkan zutere na Boston maka ịmata otu okwe siri gba, anya mmiri na-esi ebe niile. Chịa ọchị adịghị mma, ma bewe ebewe adịghị mma.
N’aka nke ọzọ, ụzụ, mkpọtụ na añụrị na-arị elu ebe ndị otu Obama zukọrọ na Chicago.
Mgbe o mechara were igwe okwu, Romney nabatara mmeri a Obama meriri ya. O kwuru na ya a kpọọlarị Obama n’ekwe ntị ya, si ya n’udo dị. Romney kpọkuru ndị Amerịka ka ha na-ekpere Obama ekpere ka Chineke nyere ya aka n’ịchị mba Amerịka, tụmadị n’oge ụnwụ a ha nọ n’ime ya.
Mgbe Obama n’onwe ya kwuru okwu, o kelere Romney na ndị otu ya. Ọ sịrị na ya ga-agba mbọ ịdozi nakwa ịme ka mba Amerịka dị mma ma lọghachi n’ọnọdụ ya dịka oke mba.